ဆေးမြီတို – MYITMYAT
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်၇န် ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်း ပန်းတောင်းမြို့နယ် ဥသျှစ်ပင်မြို့သို့ ခရီးကြုံရောက်ခဲ့ရပြန်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကုန်အံ့ဆဲဆဲ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့တွင် WYမူးယစ်ဆေးပြား ၁၄ သန်းကို စံချိန်တင်ဖမ်းမိခဲ့သော ဖြစ်စဉ်ကို အမှတ်ရမိသည်။ ထို့အတူ ထမင်းထုပ်၊ ကွမ်းထုပ်နဲ့ တောထဲမှာ ၈ ရက်ကြာကင်းထောက်ခဲ့သူကို ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရုံးမှ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာလ၏ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုထိုက်သူဆုရရှိခဲ့သော ကိုရာဇာဟိန်းကို […]
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ​မြွေ​ဟောက်​ ကိုက်​လို့က​တော့ ​မြွေ​ဟောက် ​သာမက ကင်းမီး​ကောက်​ ကိုက်​တာပါ ​ပျောက်​တဲ့ ​မြွေဆိပ်​​ပြေရွက်​ လိုအပ်​သူများ ရှယ်​နိုင်​၏. ပြန်လည်မျှဝေပါသည် မြွေဆိုး အပါအဝင်အဆိပ်ပြေသည့် မြွေဟောက်ပင် မြွေဆိုး များအကိုက်ခံရပါကမိနစ်ပိုင်းအတွင်း အဆိပ်ပြေစေသည့်အရွက်။အခေါက်။အသီးများအဆင်သင့်ရှိထားရန်လိုပေမည်။ဆေးနည်း တွေသိထားရုံဖြင့် မဖြစ်ပါ။ မြောက်ဒဂုံတွင် မြွေပွေး မတွေ့ရသော်လည်း မြွေဟောက် တွေရှိနေရာ။လူကဦးနေသဖြင့်ပြသနာမရှိသေး ဒါကြောင့် စိုက်လို့ရသော အဆိပ် အားလုံးပြေစေသည်ဆိုသည့်နင်္ဂါးနိုင်ရာဇာ ပင်ကိုစုံစမ်းရာ။ရလာသည်ကတော့ မြွေဟောက်ပင်။ မြွေဟောက်ပင် သည်နွယ်ပင်မျိုးမဟုတ်။မတ်ထောင်နိုင်သောအပင်လည်းမဟုတ်။ပေါက်ခါ စတွင်နှစ်ပေခန့်မတ်ထောင်နေပြီးအပင်ငိုက်ကျသွားကာ […]
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ကျွန်တော် ၏ ကိုယ်တွေ့ ဆေးနည်း များကို အများဝေဒနာရှင်များ သိရှိကုသနိုင်ရန် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။လွန်ခဲ့ သော (၈) တန်း ကျောင်းသား ဘ၀ လောက်ကပါ။ ကျွန်တော် ၏ ဦးမင်းနှင့် အဒေါ်ရှိရာ မအူပင်မြို့နယ် ရေလဲကလေးကျေးရွာ သို့ မရောက်တာကြာပြီဖြစ်၍ သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ မအူပင် မှ ရေလဲ ကလေး သို့ ဒေါဂျစ်ကားစီး၍ သွားရပါသည်။ ကားမှာ သံဖင်ထိုင်ခုံဖြစ်ပြီး လမ်းကလည်း […]
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ̏မြေးလေး ဒါဘာပင်လည်းသိလား˝ မသိဘူး အဘိုး…လူလေး သိအောင်လုပ်ထား˝ ̏ မင်း အမေ ကို ကယ်ခဲတဲ့ ဆေးတော်ပင်ပဲ˝ အစာစား ပြီးတိုင်း ဗိုက်အောင့် သည် ဝေဒနာ ကို ခံစားရပါသည်။ အစာအိမ် အနာ ဖြစ်ကြောင်းသိ၍ အဖက်များလုံးဝမစားရတော့ပါ အင်္ဂလိပ်ဆေး၊အမျိုးမျိုးစားပြီး အကြောဆေး များသွင်းကာ ကုသည် လည်းရှိပါသည်။တစ်နေ့တစ်ခြားအရိုးပေါ်အရေတင်မျှဖြစ်တော့သည်။ ဆေးနည်း မှာ ကျွဲနှာခေါင်းချိတ်(ခေါ်)ကြက်မောက်ဆူးပြန် ပင်၏ပဉ္စ(၅)ပါးအား သုံးခွက် တစ်ခွက်တင် […]
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် လွယ်လွယ်ကူကူပျောက်စေသောဆေးမီးတို ငါးမျက်စိ ရောဂါ ကို အင်္ဂလိပ်လိုCron ခေါ်ပါသည်။ငါးမျက်စိ ရောဂါ(molluscum Contagiosum) သည် အရေပြား ပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အဖုလေးအလုံးလေး များဖြစ် ပါသည်။ညှစ်လိုက်ပါက အဖုလုံးလေး များမှ အဆံလေးများထွက်တတ်ပါသည်။ ကူးစက် မှုလွယ်ကူးပြီး။ ထိမိ၊ဖိမိက နာလှပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ် အနှံအပြားတွင်လည်း ပေါက်တတ် ပါသည်။ သို့သော် ငါးမျက်စိ သည် ခြေထောက် တွင် ပေါက်သည်ကများပါသည်။အချို့က အသားမာ ဟု […]
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ကျွန်တော်လွန်ခဲ့သော ၂နှစ်ကျော်က ဦးခေါင်း တွင်ဆံပင် ကိုရှပ်ထိရုံနဲ့ ခေါင်း ညာဘက် အပေါ် ဦးရေပြား သည် ကျိန်းနေပါသည်။သေချာစွာပွတ်ကြည်ရင်လည်း ကျိန်းနေပါသည်။ ဆရာဝန် များနှင့်ပြသော်လည်းမပျောက်ပါ။နောက်ဆုံး ဦးနှောက် နှင့် အာရုံကြော အထူးကုဆီရောက်ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်နီးပါး ဆေးသောက်ခဲ့ရပါသည်။နောက်ပိုင်း နားအတွင်းပိုင်း နှင့် မျစ်စိ ပါအောင့်လာပါသည်။တစ်လကို ဆေးဘိုးသိန်းချီကုန်သော်လည်းမထူးခြားပါ။သက်သာ ပျောက်ကင်းသွားသောဆေးနည်းမှာငွေနည်းနည်းနှင့် အချိန်ပေးရသောဆေးဖြစ်နေပါသည်။ ဆေးနည်း မှာ ခြေနှစ်ချောင်းဆန့်သော အင်တုံ လိုအပ်ပါသည်။ထို အင်အုံ […]
SORRY – ဆောရီး ..ဆိုတဲ့ စာတစ်လုံးရဲ့ နောင်တ
ZawGyiဖြင့်ဖတ်ရန် ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးက ငယ်ငယ်လေးတည်းက အတူကြီးပြင်းလာကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို အမြဲအဖော်ခေါ်ပြီး ရွာပြင်ဖက်ကချောင်းစပ်မှာ ငါးသွားဖမ်းလေ့ရှိတယ်။ ငါးဖမ်းပြန်တိုင်း ကောင်လေးရဲ့ပလိုင်းထဲမှာ ငါးတွေကအပြည့်… ကောင်မလေးမှာတော့ လက်ဗလာနဲ့ ပြန်ခဲ့ရတာချည်းပဲ။ငါးမရခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးက မျက်ရည်အဝဲသားနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အထိ မပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူး။ ညစာစားခါနီး အိမ်ရှေ့တံခါးခေါက်သံကြားတော့ ကောင်မလေးက တံခါးဖွင့်ကြည့်တယ်။ တံခါးရှေ့မှာရပ်နေတဲ့ ကောင်လေးကိုတွေ့တော့ နှုတ်ခမ်းစူပြီး လှည့်ထွက်မယ်လုပ်တော့ကောင်လေးက ကပျာကယာရှေ့တက်ပြီး “နင့်ငါးတွေ ငါဖမ်းပစ်လိုက်တာ ဆောရီးနော်. ရော့ ဒါနင့်အတွက်”လို့တောင်းပန်ပြီး ငါးတွေထည့်ထားတဲ့ ဖန်ငါးကန်လေးကို ကောင်မလေးဆီလှမ်းပေးတယ်။ […]
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် တစ်ပြား တစ်ချပ်မှ မကုန်ဘဲ ကျောက်ကပ် ရောဂါ ပျောက်နည်း ကျောက်ကပ် ရောဂါ နဲ့ ပါတ်သက်လို့ စိတ်ညစ် နေကြ သလား။ ငွေတစ်ပြား တစ်ချပ်မှ မကုန် စေရဘဲ ပျောက်ကင်း စေရမယ်။ စိတ်ချ လက်ချနဲ့ ယုံယုံ ကြည်ကြည် သောက်ကြည့် လိုက်စမ်းပါ။ ပြောင်းဖူး က ထွက်တဲ့ အမွှေး ကို သွေခြောက်အောင် အခြောက် ခံပြီး […]